Akutholwe isisombululo kolukaMarawa | Isolezwe
Akutholwe isisombululo kolukaMarawa
ezemisakazo / 27 June 2017, 3:53pm / FANELESIBONGE BENGU
ISONTO lonke eledlule lize laphela uRobert Marawa engazwakali ohlelweni lwakhe lwezemidlalo iMetro FM Sports @ 6.
Wazidingisa yena ohlelweni lwakhe ekhala ngokuthi abaphathi bamisa emsebenzini umdidiyeli wohlelo uBeverly Maphangwa.
Wathi icala kwaba wukudlala nokufunda umbono wabasebenzela iSuperSport nokuyinto athi ayehlanga kahle kubaphathi.
UBeverly wathi kumele achaze ngalokhu ngoba engaphelelwa ngisho umsebenzi. Ngenxa yalokhu unqume ukuthi angalwethuli uhlelo abuke ukuthi izophetha kanjani indaba ye-SABC noBeverly.
Lolu daba ungalubuka ngezindlela eziningi. Uma uthanda ungathi uMarawa ukhombise ubudoda ngokweseka uzakwabo ngoba ekugcineni wuye owafunda umbono kaBaba Mthethwa. Kusho ukuthi ufa lapho kufa khona uzakwabo.
Uma uthanda ungalubuka ngokuthi akayincengile i-SABC. Ngikholwa wukuthi ukusakaza kwiMetro FM yiphupho lenqwaba yabasakazi kodwa kuye kulula ukuvele athi uyahoxa ohlelweni.
Kungenzeka mhlawumbe usaba ukuthi uBeverly nguye obemnikeza ulwazi oluthe xaxa ngezemidlalo manje usaba ukuthi njengoba engasekho nje, uzombuleka izinqa.
Kungenzeka futhi kube wukuthi indlela abhikisha ngayo le ukukhombisa abaphathi ukuthi iSuperSport uyayidinga ngoba yilapho ezemidlalo zikhonjiswa khona nanokuthi ekugcineni uBaba, ngaphezu kokuthi usebenza eSuperSport, ungumlaleli naye onelungelo lokuphawula njengabanye.
Omunye angayibuka ngokuthi uMarawa uzicabangela yena akanendaba nezinkulungwane zabalaleli bohlelo lwakhe ukuthi usengavele azilaxaze kanjalo.
Ngokwezinga akulo uMarawa angingabazi ukuthi imisakazo eminingi ilubheke ngabomvu lolu daba ukuthi luzophetha kanjani ukuze igxume ihlale kuye uma kuwukuthi ugcina ngokushiya kwiMetro FM.
Umphathi weTouch HD, uMartin Vilakazi, usanda kuphumela obala ngokuthi angakujabulela ukuphinde asebenze noMarawa kwazise bake basebenza ndawonye esaphethe iMetro.
Engingakusho kodwa wukuthi akekho umuntu omkhulu okwedlula umsakazo. Ngisho engagcina ngokuhamba kodwa umsakazo uyosala umile.
Ubani owayecabanga ukuthi i-SABC ingaxosha uLinda Sibiya kuKhozi FM luqhubeke ludlondlobale?
Ubani owayecabanga ukuthi ngeSonto iMetro FM iyophinde ilaleleke ngemuva kokuhamba kukaPaul Mtirara nokushona kuka-Eddie Zondi?
I-SABC ayithole isisombululo kulolu daba kubuye uMarawa noMaphangwa emsebenzini ukuze sizophinde sizwe uhlelo lwezemidlalo oluseqophelweni eliphezulu.
Izindondo abazitholayo emiklomelweni kusuke kungelona iphutha ngoba loluya hlelo luhamba phambili kuleli kwezemidlalo.
UMarawa lolu daba useluyise kubameli bakhe ngemuva kokuthi ebe nomhlangano nabakwa-SABC okusolakala ukuthi imcele ukuthi abhale incwadi achaze ukuthi kungani le nhlangano kumele ingayinqamuli inkontileka enayo naye.
Ungangibhalela [email protected], kuTwitter: @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu